လပ်တော့ပ်တစ်လုံးအခိုးခံလိုက်ရရင် တစ်ခုတည်းသောကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့်အရာက? – DigitalTimes.com.mm
350 Shares 108 Views
ကိုယ့်ရဲ့လပ်တော့ပ်ပျောက်သွားတာ ဒါမှမဟုတ် ခိုးခံလိုက်ရတယ်ပဲ ဆိုပါစို့။ တန်တာက ၇သိန်း ၈သိန်း ၁၀ သိန်းလောက်ရှိရင်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အထဲမှာအဲ့တာတွေထက်ပိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ဒေတာတွေများရှိနေရင်?
ကိုယ့်ကွန်ပျူတာအတွက်ထားထားတဲ့ password က အထဲက ဒေတာတွေကို မကာကွယ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ password ဆိုတာက ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲကို တခြားတစ်ယောက် log-in ဝင်ပြီးသုံးမရအောင်ပဲ ကာကွယ်ပေးတာဖြစ်ပြီး တကယ်ဒေတာတွေကိုရယူချင်တဲ့သူကတော့ အထဲကဖိုင်တွေကိုကူးယူဖို့အတွက် တခြားနည်းလမ်းပေါင်းများစွာနဲ့ရယူနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီကွန်ပျူတာက hard-drive ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီး နောက်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးထဲကိုထည့်လိုက်ရင် ကိုယ်သိမ်းထားသမျှဖိုင်တွေအကုန်သူရသွားမှာပါ။ ကိုယ့် PC ရဲ့ password ကိုလည်းပြောင်းလိုက်လို့ရတဲ့အပြင် အီးမေးလ်၊ password နဲ့တခြား ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုပါ ရသွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုဒေတာခိုးယူမှုတွေမဖြစ်ရအောင် ကိုယ့်ကွန်ပျူတာကို encrypt လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။ Encryption လုပ်တယ်ဆိုတာ ဒေတာတွေအကုန်လုံးကို ရောသမမွှေဖို့အတွက်သုံးတဲ့ သင်္ချာနည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ ကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးဖိုင်တွေကို encrypt လုပ်မယ်ဆိုရင် “key” တစ်ခုထားရပါမယ်။ ဒါဆို ကိုယ့်ကွန်ပျူတာကိုခိုးသွားရင်တောင်မှ ကိုယ့်ရဲ့ key ကိုသူတို့မသိရင် ရောသမမွှေထားတဲ့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ဖိုင်ကြီးပဲသူတို့ရပါလိမ့်မယ်။ encrypt သာလုပ်ထားရင် အလွယ်တကူ password ကို reset ချလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူး။
Encrypt လုပ်ဖို့ဆိုတာကလည်း ပရိုတွေမှလုပ်တတ်တာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင်တောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ တချို့ Window 10 ကွန်ပျူတာတွေမှာဆိုရင် encryption ကို “default” အနေနဲ့ဖွင့်ထားပေးပြီးသားပါ။ စစ်ချင်ရင်တော့ Setting> System> About ကနေ scroll ဆွဲပြီး “Device Encryption” ကိုသွားပါ။ ဒီ feature ကိုသုံးဖို့အတွက် Windows ကို Microsoft အကောင့်နဲ့ဝင်ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လပ်တော့ပ်က ဒီ feature ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဒေတာတွေကိုအလွယ်တကူကာကွယ်နိုင်ပါပြီ။
ဒါပေမယ့် လပ်တော့ပ်က Device Encryption ကိုမထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ Window ရဲ့တခြား built-in encryption tool ဖြစ်တဲ့ “BitLocker” ကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ Windows professional version တွေမှာသာ BitLocker ရနိုင်ပြီး set-up လုပ်ဖို့လည်း တော်တော်လေးလွယ်ပါတယ်။ Windows Control Panel > System and Security > Manage BitLocker ကိုသွားပါ။ ကိုယ့် Operating System ကိုရွေးပြီး “ Turn On BitLocker” ကိုနှိပ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ encryption key အနေနဲ့ထားမယ့် password တစ်ခုဖန်တီးဖို့ ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ရုံပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Key ကိုတော့ ကွန်ပျူတာထဲမှာမှတ်မထားဘဲ တခြားတစ်နေရာရာမှာမှတ်ထားပါ။
Mac လပ်တော့ပ်တွေအတွက်ကတော့ ၂၀၀၃ လောက်ကတည်းက FileVault လို့ခေါ်တဲ့ feature လေးတစ်ခုပါလာပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ system drive ကြီးတစ်ခုလုံးကို encrypt လုပ်ပေးတဲ့အတွက် သုံးချင်ရင် System Preferences> Security & Privacy> FileVault tab ကိုရွေးလိုက်ရင်ရပါပြီ။
ဒီနေ့ခေတ်မှာကံကောင်းတာက iPhone တွေ ခေတ်ပေါ် Android ဖုန်းတွေမှာ ဒေတာတွေကို အော်တို encrypt လူက်ပေးလို့ ကွန်ပျူတာတွေ desktop တွေအတွက်ပဲစိတ်ပူရမှာပါ။ ဖုန်းမှာ SD ကဒ်ပါရှိသေးရင် SD ကဒ်ကိုပါ encrypt လုပ်လို့ရပါတယ်။
တစ်ခုလေးပဲမှတ်ထားပေးရမှာက password ကိုလုံးဝမမေ့ပါစေနဲ့။ ကိုယ်သိမ်းနေကျ လုံခြုံတဲ့အပြင်တစ်နေရာရာမှာမှတ်ထားသိမ်းထားပါ။ ဒါဆိုရင် လပ်တော့ပ်အခိုးခံရရင်တောင် ကိုယ့်ရဲတန်ဖိုးရှိလှတဲ့ဒေတာတွေအတွက် စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
ကိုယျ့ရဲ့လပျတော့ပျပြောကျသှားတာ ဒါမှမဟုတျ ခိုးခံလိုကျရတယျပဲ ဆိုပါစို့။ တနျတာက ၇သိနျး ၈သိနျး ၁၀ သိနျးလောကျရှိရငျရှိပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့အထဲမှာအဲ့တာတှထေကျပိုတနျဖိုးရှိတဲ့ဒတောတှမြေားရှိနရေငျ?
ကိုယျ့ကှနျပြူတာအတှကျထားထားတဲ့ password က အထဲက ဒတောတှကေို မကာကှယျပေးနိုငျပါဘူး။ password ဆိုတာက ကိုယျ့ကှနျပြူတာထဲကို တခွားတဈယောကျ log-in ဝငျပွီးသုံးမရအောငျပဲ ကာကှယျပေးတာဖွဈပွီး တကယျဒတောတှကေိုရယူခငျြတဲ့သူကတော့ အထဲကဖိုငျတှကေိုကူးယူဖို့အတှကျ တခွားနညျးလမျးပေါငျးမြားစှာနဲ့ရယူနိုငျပါတယျ။ အဲဒီကှနျပြူတာက hard-drive ကိုဖွုတျလိုကျပွီး နောကျကှနျပြူတာတဈလုံးထဲကိုထညျ့လိုကျရငျ ကိုယျသိမျးထားသမြှဖိုငျတှအေကုနျသူရသှားမှာပါ။ ကိုယျ့ PC ရဲ့ password ကိုလညျးပွောငျးလိုကျလို့ရတဲ့အပွငျ အီးမေးလျ၊ password နဲ့တခွား ကိုယျရေးအခကျြအလကျတှကေိုပါ ရသှားနိုငျပါတယျ။
ဒီလိုဒတောခိုးယူမှုတှမေဖွဈရအောငျ ကိုယျ့ကှနျပြူတာကို encrypt လုပျထားလို့ရပါတယျ။ Encryption လုပျတယျဆိုတာ ဒတောတှအေကုနျလုံးကို ရောသမမှဖေို့အတှကျသုံးတဲ့ သခငြ်္ာနညျးလမျးတဈခုပါ။ ကိုယျ့ရဲ့အရေးကွီးဖိုငျတှကေို encrypt လုပျမယျဆိုရငျ “key” တဈခုထားရပါမယျ။ ဒါဆို ကိုယျ့ကှနျပြူတာကိုခိုးသှားရငျတောငျမှ ကိုယျ့ရဲ့ key ကိုသူတို့မသိရငျ ရောသမမှထေားတဲ့ ဘာမှနျးမသိတဲ့ဖိုငျကွီးပဲသူတို့ရပါလိမျ့မယျ။ encrypt သာလုပျထားရငျ အလှယျတကူ password ကို reset ခလြို့လညျးမရနိုငျပါဘူး။
Encrypt လုပျဖို့ဆိုတာကလညျး ပရိုတှမှေလုပျတတျတာမဟုတျဘဲ ကိုယျတိုငျတောငျလုပျလို့ရပါတယျ။ တခြို့ Window 10 ကှနျပြူတာတှမှောဆိုရငျ encryption ကို “default” အနနေဲ့ဖှငျ့ထားပေးပွီးသားပါ။ စဈခငျြရငျတော့ Setting> System> About ကနေ scroll ဆှဲပွီး “Device Encryption” ကိုသှားပါ။ ဒီ feature ကိုသုံးဖို့အတှကျ Windows ကို Microsoft အကောငျ့နဲ့ဝငျရမှာပါ။ ဒါပမေယျ့လပျတော့ပျက ဒီ feature ကို ထောကျပံ့ပေးနိုငျတယျဆိုရငျတော့ ကိုယျ့ဒတောတှကေိုအလှယျတကူကာကှယျနိုငျပါပွီ။
ဒါပမေယျ့ လပျတော့ပျက Device Encryption ကိုမထောကျပံ့ပေးနိုငျဘူးဆိုရငျတော့ Window ရဲ့တခွား built-in encryption tool ဖွဈတဲ့ “BitLocker” ကိုသုံးလို့ရပါတယျ။ Windows professional version တှမှောသာ BitLocker ရနိုငျပွီး set-up လုပျဖို့လညျး တျောတျောလေးလှယျပါတယျ။ Windows Control Panel > System and Security > Manage BitLocker ကိုသှားပါ။ ကိုယျ့ Operating System ကိုရှေးပွီး “ Turn On BitLocker” ကိုနှိပျ၊ ကိုယျ့ရဲ့ encryption key အနနေဲ့ထားမယျ့ password တဈခုဖနျတီးဖို့ ခိုငျးတဲ့အတိုငျးလိုကျလုပျရုံပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ Key ကိုတော့ ကှနျပြူတာထဲမှာမှတျမထားဘဲ တခွားတဈနရောရာမှာမှတျထားပါ။
Mac လပျတော့ပျတှအေတှကျကတော့ ၂၀၀၃ လောကျကတညျးက FileVault လို့ချေါတဲ့ feature လေးတဈခုပါလာပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ system drive ကွီးတဈခုလုံးကို encrypt လုပျပေးတဲ့အတှကျ သုံးခငျြရငျ System Preferences> Security & Privacy> FileVault tab ကိုရှေးလိုကျရငျရပါပွီ။
ဒီနခေ့တျေမှာကံကောငျးတာက iPhone တှေ ခတျေပျေါ Android ဖုနျးတှမှော ဒတောတှကေို အျောတို encrypt လူကျပေးလို့ ကှနျပြူတာတှေ desktop တှအေတှကျပဲစိတျပူရမှာပါ။ ဖုနျးမှာ SD ကဒျပါရှိသေးရငျ SD ကဒျကိုပါ encrypt လုပျလို့ရပါတယျ။
တဈခုလေးပဲမှတျထားပေးရမှာက password ကိုလုံးဝမမပေ့ါစနေဲ့။ ကိုယျသိမျးနကြေ လုံခွုံတဲ့အပွငျတဈနရောရာမှာမှတျထားသိမျးထားပါ။ ဒါဆိုရငျ လပျတော့ပျအခိုးခံရရငျတောငျ ကိုယျ့ရဲတနျဖိုးရှိလှတဲ့ဒတောတှအေတှကျ စိတျပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။